ဟန်ဆောင်နေတဲ့ လူ့ရဲ့စိတ် …….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟန်ဆောင်နေတဲ့ လူ့ရဲ့စိတ် ……..
ဟန်ဆောင်နေတဲ့ လူ့ရဲ့စိတ် ……..
Posted by Khaing Khaing on May 10, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
ဟန်ဆောင်မှုတွေ ကင်းပါစေ ....
လူ့လောကမှာ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတာရှိကြပါတယ် ………. လူ နဲ့ စိတ် … စိတ် နဲ့ လူ…. လူတွေအကြောင်းစိတ်တွေအကြောင်း ပြောကြည့်မယ် ကြုံဖူးခဲ့တောတွေပါ ဖတ်ဖူးခဲ့တာတွေတော့ မဟုတ် လက်တွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် စာတွေ့နဲ့တော့ ကွာချင်ကွာလိမ့် …….
ငယ်ငယ်တုန်းကသူငယ်ချင်း …….. နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရင် သိပ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုခွဲရတော့မျက်ရည်ကျရတယ် ……. သူမကတော့ဒါတွေကိုမသိပါဘူး ကျွန်မက အစွဲအလမ်းကြီးတယ် လူတွေကိုခင်မင်လွယ်တယ် …. ဒါဟာကျွန်မရဲ့အားနည်းချက်ပဲ …….
မခွဲချင်ပေမယ့်လည်း အလယ်တန်းကျောင်းတက်တော့ သူနဲ့ကျွန်မခွဲရတယ် သူက “C”ခန်း ကျွန်မက “B”ခန်း ကျောင်းအသစ် ရောက်တော့လည်း အားလုံးကပျော်နေတာပေ့ါလေ… ကျွန်မကသူ့ကိုခင်တော့ သူ့အခန်းကိုနေ့ခင်းတိုင်းသွားဖြစ်တယ် သူမကတော့ အေးတိအေးစက်ပါပဲ ကျွန်မစိတ်ထဲ အရမ်းကိုခံစားရတယ် ..
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ၆ တန်းတက်တော့ သူငယ်ချင်းမလေးနောက်အသစ်တစ်ယောက်ထပ်ရတယ် သူကကျွန်မကိုသိပ်ခင်တယ် ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ခင်မင်မှုက အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် အတ္တကြီးတယ် သူကသာတစ်ခြားလူကိုခင်မယ် ကျွန်မတော့ မည်သူ့ကိုမှ မခင်ရဘူး ….. ခင်ရင်သူမကြိုက်ဘူး ……. အရမ်းလည်းအနိုင်ကျင့်တယ် အဲတုန်းကတော့ကလေးဘ၀ ဆိုတော့လည်း စိတ်ထဲခံစားချက်ကကြီးကြီးမားမားသိပ်မရှိလှပါဘူး …….. သူနဲ့ကျွန်မ ၈ တန်းရောက်တော့ အခန်းကွဲသွားတယ် သူကကျွန်မကို သူ့အခန်းထဲကိုပြောင်းလာစေချင်တယ် ကျွန်မကလည်းသူ့ကိုသိပ်ကြောက်တော့ မပြောင်းဖြစ်ပါဘူး …….. ကျွန်မကိုသူမအရမ်းစိတ်နာသွားတယ် …….. သူကအတ္တအရမ်းကြီးတယ်လေ မဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်မကိုလုပ်ခိုင်းတယ် ကျွန်မက သူ့ထက်အခန်းမြင့်တယ် သူကအခန်းနိမ့်တယ် ကျွန်မကသူမအခန်းကို ပြောင်းဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှာ မိဘအုပ်ထိန်းသူရှိတယ်လေ သူတို့ကလက်ခံမလား ဒါကိုသူမကဆရာမတွေဆီကို ငိုယိုသွားပြောတယ် ကျွန်မလေသူမကို အရမ်းကိုကြောက်တယ် ယနေ့အထိပါဘဲ …….
အတိုချုပ်ပြောရရင် ကျွန်မဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့ရာမှာ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် …….. အားလုံးကိုလည်းခင်တယ် ယခုချိန်ထိသတိရအမှတ်ရနေဆဲပါ ဒါပေမယ့်သူတုိ့က ကျွန်မကိုမခင် ကြပါဘူး …… ကျွန်မက ဆင်းရဲတယ် စာလည်းသိပ်မတော်ဘူး ရင်ထဲရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံတတ်တယ် လူတွေကဒါမျိုးကိုမကြိုက်ဘူး ဟန်ဆောင်မှကြိုက်ကြတာ … ဟန်လုပ်မှကြိုက်ကြတာလေ …….. ကျွန်မအခုအသက်အရွယ်နဲ့ အလွှာမျိုးစုံ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံမှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးပါပြီ လူတွေကိုလည်း ရွံလည်းရွံတယ် ကြောက်လည်းကြောက်သွားတယ် ကိုယ်ကပျော်ပျော်နေတတ်တယ် ပွင့်လင်းတယ် ဒါကို အခွင့်အရေးယူချင်ကြတယ် နှိမ်ချင်ကြတယ် ပျော်ပျော်နေတာကို အပေါစားလို့ထင်တယ် ဟိတ်ဟန်လုပ်တဲ့သူတွေ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေဆို မှားနေလဲ လူတွေက ရှေ့မှာဘာတစ်ခုမှမပြောရဲကြဘူး သူတို့အရှေ့ကိုရောက်တိုင်းလည်း အဲလူတွေက ဟန်လုပ်ဆက်ဆံကြတယ် အဲလိုဟန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကို ကျွန်မသိပ်မုန်းတယ် ကိုယ်ကတော့ စိတ်မဆိုးတတ်တော့ ပြောမနာဆိုမနာ ပိုးဆိုးပက်စက်ပြောကြတယ်လေ အလျှော့ပေးခဲ့တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေကိုမြိုသိပ်ခဲ့ရတာများနေပါပြီ လူတွေကိုဟန်လုပ်ပေါင်းသင်းဆက် ဆံရတာလည်း မောလှပါပြီ ဒါကြောင့်အဖော်မင်တဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ် လူတွေကိုခင်တတ်တဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ် လူတွေကိုသနားတတ်တဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ် လူတိုင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံတတ်တဲ့ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြုပြင်ပြီးနေထိုင်သွားရင် ကျွန်ရင်ထဲကအပူတွေလည်း အများကြီးသက်သာသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ် ……… ပြုပြင်တယ်လို့ပြောတာပါ လူတစ်ယောက်ဟာ မိမိရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ် ကောင်းတဲ့စိတ်ကို ပြုပြင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါတယ် …
(စကားမစပ် အပြင်မှာမပြောနဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာတောင် ဟန်ဆောင်မှုတွေရှိသေးတယ်…. ရွာထဲမှာတောင် ကိုယ်မကျေနပ်တာကို ကျေနပ်ချင်ယောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတောင်ရေးရသေးတယ် ခစ် ခစ် ခစ်… ဒေါသထွက်နေတာတောင် စာသားလှလှလေးရွေးပြီးရေးရတယ်လေ သူတော်ကောင်းအမျက် အပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုပြီ ကဲ … ဘယ်လောက်မကောင်းတဲ့ဘ၀လဲ …. )
ရင်ထဲရှိတာကိုရေးမိတာ ဖတ်ချင်တဲ့သူများဝင်ဖတ်သွားနိုင်သလို မဖတ်ချင်သူများလည်း မဖတ်ကြပါနဲ့ ……. ကော်မန့်များကို Reply မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော် …….
ကိုလေးဖြူတို့ ..ကိုမျိုးကြီးတို့တစ်ဖွဲ့ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး သွားသတိရတယ်ဗျာ
ဟန်ဆောင်တာတွေ ထားခဲ့ပါ..ဆိုကလားပဲ..တားတားတို့လဘက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်ရင် ဆိုင်ရှင် လော်ကာအူးကမ်းကြီးက
ကျန်တာတော့ သိပ်နားမလည်လို့လျှာမရှည်တော့ပါဘူးဗျား..
ဟန်ဆောင်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကျနော်ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ဝင်ပွားရဦးမယ် ..
စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ..
အဲဒီ စာအုပ်ထဲမှာ ဆရာကြီးတစ်ယောက်က သူ့တပည့်ကို ပြောတယ် ..
လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မျက်နှာက အများဆုံးပြတာတဲ့ ..
ငါကတော့ ငါ့ရဲ့ စိတ်ထဲ ဘယ်လို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူများတွေ အကဲမခတ်နိုင်အောင်
အမြဲတမ်း မျက်နှာကို တည်တည်တံ့တံ့ပဲ ထားတယ်ကွ … တဲ့ …
အဲဒီ စကားကို အရမ်းကြိုက်သွားခဲ့တာ ..
ဒါနဲ့ အဲဒီလို ဖြစ်အောင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မျက်နှာသေ ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် ..
ဒါနဲ့ ခုထိ အကျင့်ပါနေရော ဆိုပါတော့ …….
ကျနော့် အန်တီဆို ကျနော့်ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ခဏခဏ ဆူပြောခဲ့ဖူးတယ်ဗျ …
ဒါက ကြုံတုံး ဝင်ပွားတာ …
ကျန်တာတွေတော့ ကျနော်လည်း ပြောတတ်တော့ဘူးဗျာ …
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်နေရာမှာ မဆို ဖြစ်သင့်တဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်လေးတစ်ခုထားပြီး
နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့မဆို ရေရှည်ဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။
ဒါကို ဟန်ဆောင်တယ်လို့ မခေါ်ပါဘူး။
ဘာဘဲပြောပြော ကောင်းသူတွေထံကို အမှန်တကယ်ကောင်းသူတွေဘဲရောက်လာမှာ အသေအချာ။
စကာနပန်း ပြောရင်ကောင်းမလားနော် … :D
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတာလို
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တာကို ပြောတတ်တာ သဘောကျတယ် ဒါပေမဲ့ တသက်လုံးက ထိန်းချုပ် လာတာတွေက အကျင့်ပါလာပြီးတော့ တဘက်လူကို မကျေနပ်ဘူး မကောင်းဘူးလို့ ပြောစရာရှိတာတောင် ပြောလို့မထွက်တော့ဘူး ၊ ရွာထဲက လူတချို့ ပြောချင်တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေကြတာကိုကြည့်ပြီး အားကျမိတယ်
အခုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အစွန်းနှစ်ခုလွတ်အောင်တော့ ရှောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ် ပြောသင့်တာကို အားနာလို့ဆိုပြီး ပြောမထွက်တာ ရယ် မှန်တာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ တဘက်လူရော ကိုယ့်အတွက်ပါ အကျိုးမရှိစေတဲ့ ပြောပေါက်မျိုး
တစ်ချို့ ကမင့်ကြောင့် အရက်ဆိုင်မှာ…
သြော..ဒါနဲ့..အံတီချိုရေ …မာယာနဲ့ ဟန်ဆောင်တာ တူတူပဲလားး
ဟန်မဆောင်တတ်မှုတွေကြောင့် ” သူ့အလွန် ကိုယ့်အမှား”
ခိုင်ခိုင်ပြောတဲ့ (ဟန်ဆောင်မှကြိုက်ကြတာ … ဟန်လုပ်မှကြိုက်ကြတာလေ)
ဆိုတဲ့လောကကြီးထဲမှာ” နေရာတော်တော်မကျ ” ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ ။
(ဘယ်နေရာမှာ မဆို ဖြစ်သင့်တဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်လေးတစ်ခုထားပြီး
နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့မဆို ရေရှည်ဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။)
ဆိုတဲ့ SKILLS လေးမရှိလို့ “မိတ်ဆွေများစွာ စွန့်ပစ်” ခံရဖူးပါရဲ့ ။
ဝဲသနော် ကျမျက်ရည် မချိရက်ပါဘု
ကိုအောင်ဘု က ဘယ်နှစ်ကျပ် မသိပါဟု
ဖတ်ချင်လို့ဝင်ဖတ်သါားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒါမျိုး.အတွေးလေးတွေက ဖတ်လို့ ကောင်းလို့ ..ဆက်လက် ရေးသားစေချင်ပါတယ်..လို့။
. ကော်မန့်များကို Reply မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော် …….
လုပ်ချင်ရက်နဲ့ ဟန်ဆောင်နေပါသည် .. ခွီ ခွီ …. :grin:
မ Khaing Khaing ရေ
ကျနော်က သိပ်ပြီးကွန်မန့် ပေးလေ့မရှိပေမယ့် ဒီစာလေးကို သဘောကျလို့ လာပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ရေးသမျှ ပြောသမျှတွေမှာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းအောင် ယုံကြည်တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရေးခဲ့ပြောခဲ့တယ်ဗျ။ စကားမစပ် ကျနော်က ရှေးခေတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ကြိုက်တတ်လို့ ကြည့်ဖူးတဲ့ အထဲက ဖာတလုံခေါင်းကျား ဇတ်လမ်းထဲက မင်းသားကြီး ဦးအေးကြူ ပြောသလို ပြောကြည့်အုံးမယ်။ “အို အသင်လောက အသင်လောက လောက၌ တရားမျှတရေးဝါဒ ဟုဟန်ဆောင် လိမ်ညာ အော်ဟစ်၍ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တတ်သော လူလိမ် လူညာများ ရှိနေသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့ရပါပြီ အသင်လောက”။ အားလုံးရယ်ရအောင်ပါဗျာ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။
မခိုင်ခိုင်အတွက် ကျနော်ပို့စ်လေးတခု ရေးပေးထားတယ်။ ကျနော်က အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျနော်ရေးတဲ့ ပို့စ်ကိုသူများကို ဖိတ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ မခိုင်ခိုင်ကို ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မခိုင်ခိုင်ပို့စ်ကလေး နဲ့ဆက်စပ်တယ် ထင်လို့ မခိုင်ခိုင်နာမည်ကို ယူသုံးမိတဲ့အတွက် တလေးတစား ဝင်ဖိတ်တာပါ။
ကိုယ့်အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောမယ်နော်။
လက်တွေ့မှာ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း လက်လွတ်စပယ် လွန်လွန်ကျူးကျူး ပြောဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အရိယာမဟုတ်လို့ ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာတောင်မှ
စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း နှုတ်က မပြောဖြစ်အောင်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အကျင့်ကို (ကောင်းသော ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဟန်ဆောင်နိုင်အောင်ကို) မနည်းကြိုးစားထားရပါတယ်။
လူတိုင်း ဟန်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ လို့ တောင် ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ခရီးသွားတုန်းက ရိုစ့်မင်းကို သနပ်ခါးလေးနဲ့တွေ့တော့ ခိုင်ခိုင် လားလို့တောင် မေးမိသေးတယ်။
ရင်ထဲရှိဒါပေါရယင် ပွိုင့်တိုးပေးဘာ.. ဆောရီး သဂျီးဦးခိုင်နဲ့ ရောသွားဒယ်..။ ခိုင်ဃို ဦးကြောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးမယ်… ကြောင့်ဂိုခြစ်မလား မောင့်ကိုချစ်မလား..ပေါ။ :cool:
ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေမပါ စိတ်ရင်းတိုင်းဆက်ဆံတတ်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်ကတော့ …. အပေါက်ဆိုးတဲ့ လူအဖြစ် ၊ လူစွာတစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရခြင်းပါပဲ …ကိုယ်တွေ့နော် ..ကိုယ်တွေ့ ….
ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာကို တခြားနည်းနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောရရင်တော့ လူတွေကို အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံတယ်ပေါ့။ အဲလိုမှ မဆက်ဆံရင်တော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ မပြေလည်မှု့များစွာနဲ့ ကိုယ်တယောက် ထဲဒေါသတွေနဲ့ ပူလောင်နေရမှာမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟန်ဆောင်တယ်ပဲပြောပြော ဘာပြောပြော ကျွန်မကတော့ အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံတယ်ဆို တာကိုပို သဘောကျတယ်။ စိတ်ရှိတိုင်းပြောကြမယ်ဆိုရင် လူအားလုံး အပြစ်ကိုယ်စီရှိကြတာမို့ တယောက်တယောက်မညှာတန်းပြောကြဖို့မလွယ်ပါဘူး။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘယ်သူမှ အပြစ်မကင်းသလို အားလုံးနဲ့စိတ်တိုင်းကျဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမို့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အဆင်ပြေအောင်ကျိုးစားပြီးနေရမှာပါပဲ။ မိသားစုတခုမှာတောင်မှ တယောက်နဲ့တယောက် စိတ် သဘောထားအယူအဆမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိရင် ညှိယူကြရသေးတာပဲ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းမှာလဲ ကိုယ်သဘောမတွေ့ပေမဲ့ အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံရတာပဲ။ မဆန်းပါဘူး။
ဆောရီးဘယ်လိုကနေဘယ်လို reply မိသွားလဲမသိဘူး။ တုန်တုန်အောက်ရောက်သွားတယ်။ သီးသန့်မန့်တာပါ။
အစ်မသဲနုအေးရေ .. ဟန်ဆောင်နေရတာချည်းကိုက (ဘယ်လိုမှဖီးလ်မလာဘူး) ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်နေရသလိုရော သူများကိုပါ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မဆက်ဆံပဲ လိမ်နေရသလို ခံစားမိလို့ …… ဟန်ဆောင်နေရတာထက် .. ဥပက္ခာပြုခြင်းကိုသာ … အများဆုံး ရွေးခြယ်မိပါတယ် … ။
ကြိုးစားပြီး reply လုပ်စေချင်ပါတယ်။ဟန်ဆောင်တတ်တာကို ဝေဖန်တာလေးသိပ်ကောင်း
(စကားမစပ် အပြင်မှာမပြောနဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာတောင် ဟန်ဆောင်မှုတွေရှိသေးတယ်…
. ရွာထဲမှာတောင် ကိုယ်မကျေနပ်တာကို ကျေနပ်ချင်ယောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတောင်ရေးရသေးတယ် ခစ် ခစ် ခစ်…
ဒေါသထွက်နေတာတောင် စာသားလှလှလေးရွေးပြီးရေးရတယ်လေ သူတော်ကောင်းအမျက် အပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုပြီ ကဲ … ဘယ်လောက်မကောင်းတဲ့ဘ၀လဲ …. )
အင်း. ဒါလေးက ကြိုက်လို့ ပါဗျ
တစ်ခါတစ်လေတော့ လဲ …
“ကိုယ့်ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖဝါး၊ သူ့ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖမိုး” ဆိုတဲ့ စကား လေး ရှိတာ ကို အရီး တို့ မေ့မေ့ သွားတာ။
မျက်မမြင်ပုဏ္ဏားတွေလို ကိုယ်စမ်းတဲ့ နေရာ ကို အမှန်လို့ဘဲ တွေးနေတတ်တာ။
အဲဒါတွေ ကို ဆင်ခြင် မိရင် “သူမှန်သလို ငါမှန်သလို နဲ့ ဖြစ်နေတတ်တော့” အကောင်းဆုံးလမ်း ဖြစ်တဲ့ “သူတစ်ပါးကို နားလည်ပေးလိုက်ခြင်း” ဆိုတာကို ရှေ့တန်း ထားလိုက် ရင် ဟန်ဆောင်တာ ဆိုတာ ဟာ ရိုးသားခြင်း မေတ္တာ (လူရွှင်တော် မဟုတ် ;-)) ကို ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေတော့ လဲ ….
ကိုယ့် ကို နှက်နေမှန်း သိသိကြီး နဲ့ မသိသယောင် ပြုံးပြုံးလေး ဟန်ဆောင် ရင်းက နေ တစ်ဖြေးဖြေး အကျင့်ပါလို့ တော်ရုံဆို ဗွေမယူ တတ်တော့ဘဲ လစ်လျုရှု နိုင်သွားတတ်ပါတယ် ခိုင်ရေ။
အတွေ့အကြုံ တွေ ပေါ်က နေ သင်ခန်းစာတွေ ယူတတ်လာချိန်
နှစ်ဘက် ကို မျှကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း နေလာခဲ့ရင်
လူတွေ ဟာ သူနည်းသူ့ဟန် နဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းလာကြမှာပါ။ :-)
အားပေး ဖတ်ရှု့ပါတယ် ညီမလေး
ဟန်ဆောင်တာနဲ့ သရုပ်ဆောင်တာ မတူဘူးလား
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်မြို့မှာ သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်
အဲဒါတွေနဲ့..အစွန်းရောက်သွားတတ်တာတွေကို.. ထိန်းညှိဖို့.. တရားဓမ္မဆိုတာရှိတယ်..